Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Eric Cantona hoodmụaka Akụkọ Banyere Untold Biography Eziokwu
Anyị Eric Cantona Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị Full Story of a Football Legend with the nickname “Eze“. Ọ na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ Football Legend.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Eric Cantona's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise banyere ndụ ya.
Ihe omuma nke Eric Cantona. Lee ndụ nwata ya na mbili ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọrụ ya na iweghachi Manchester United dị ka ike ịgba bọọlụ na 1990s. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Eric Cantona's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Eric Cantona nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Eric Daniel Pierre Cantona a mụrụ na 24th ụbọchị nke May 1966 na Marseille na France. Ọ bụ nwa nke abụọ n'ime ụmụ atọ nne ya, Éléonore Raurich mụrụ, na nna ya Albert Cantona.
Baby Eric Cantona ya na nne Éléonore Raurich.
A zụlitere agbụrụ French nke agbụrụ ọcha na ndị Italiantali, French yana mgbọrọgwụ Spanish-Catalan na Caillols mpaghara nke Marseille, ebe o toro na nwanne ya nwoke bụ Jean Marie na Joel.
N'ịbụ onye tolitere n'ala nna ya, ezinụlọ Cantona dara ogbenye. Ka o sina dị, ọ nwere obi ụtọ n'oge nwata mara oke egwu n'okporo ámá n'okporo ámá na ekele mara mma nke ala Oké Osimiri Mediterenian gbara ụlọ ha gburugburu.
Akụkọ Eric Cantona nke Childhoodmụaka - Nkụzi na Ọrụ Buildup:
Ka ọ na-erule oge Cantona dị afọ 15, ọ malitere ịkụ bọl bọọlụ ahaziri na klọb nke mpaghara SO Caillolais ebe ọ malitere dị ka onye mgbaru ọsọ mana n'oge na-adịghị anya chọpụta na akụkụ nke ihe ọ bụla na-egbochi mgbaru ọsọ ọ bụla.
Eric Cantona dị afọ 15 mgbe ọ malitere igwu egwu maka Obodo Club SO Caillolais.
N'ihi ya, ọ na-agagharị n'ihu, na-anụ ụtọ usoro ọ bụla mana ọ kwụsịrị ịga n'ihu ebumnuche mmegide dị ka etiti-ịga n'ihu.
N'ịbụ onye gosipụtara ihe karịrị egwuregwu 100 maka SO Caillolais, Cantona banyere ụgbọ mmiri maka klọb Auxerre ebe ọ nwere olile anya ịghọ ọkachamara.
Eric Cantona Childhood Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite:
Cantona rutere Auxerre dị ka onye dị afọ 16 nke na-ele ọ bụla dị ọcha. Mmefu egwuregwu ahụ jiri afọ abụọ na-arụ ọrụ gabiga ya ruo mgbe o mechara rụpụta ọrụ ọkachamara ya n'oge mmeri egwuregwu 4-0 na Nancy.
Ihe osise nke Eric Cantona n'akụkụ ndị ọkachamara Auxerre.
Mgbe nke ahụ gasịrị, etinyere ọrụ Cantona n'afọ 1984 iji nyere ya aka ịmalite ọrụ mmanye nke mba mgbe nke ahụ gasịrị, e binyere ya ego na Martigues.
Agbanyeghị na ihe niile malitere nke ọma maka Cantona na Martigues, “mechie nke ọma” bụ ahịrịokwu nke amabeghị maka afọ 7 sochirinụ ọrụ ya.
Eric Cantona Biography Eziokwu - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ bụ na Martigues ka Cantona mere egwuregwu egwuregwu izizi ya mbụ mgbe ọ tiri onye otu egwuregwu Bruno Martini ihu. N'afọ na-esote (1988) ọ gara na kungfu niile iji merie onye ọkpụkpọ Nantes, Michel Der Zakarian.
Usoro nke iwu na nkwusioru nke amalitere iji gbochie Cantona nke oke ya ewepụtaghị nsonaazụ dị mma ka enwere ya nsogbu n'okwu gbasara ịdọ aka ná ntị na Marseille, Bordeaux, Montpellier, na Nimes ebe ọ mara ọkwa ezumike nká mbụ ya na football na 1991.
Eric Cantona nwere nnukwu nsogbu n'ọzụzụ na ịdọ aka ná ntị maka akụkụ ka mma nke ọrụ ya.
Eric Cantona Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Na-eme na ndụmọdụ nke ezigbo enyi ya na nnukwu onye ofufe - Michel Platini, Cantona laghachiri na football na Sheffield Wednesday ebe o nwere obere oge.
Mgbe nke ahụ gasị, ọ nọrọ ọnwa ole na ole na Leeds United wee nyere klọb aka inweta Premier League.
Nnukwu ezumike Cantona abịabeghị na 1993 mgbe ọ nyeere Manchester United aka inweta mmeri mbụ ya na 26 afọ.
Site na njirimara ahụ, Cantona ghọrọ onye ọkpụkpọ izizi iji merie aha otu Premiya na otu dị iche iche na oge ndị ga-esochi.
Eric Cantona nyeere Manchester United aka inweta mmeri nke Premier League na 1993.
Ọsọ ọsọ na ụbọchị Cantona na-ere ahịa ya na ụlọ ọrụ ntụrụndụ dị ka omee. Igwe egwu izizi ya mere mgbe 1995 kwụsịtụrụ na bọọlụ n'oge ọ na-arụ ọrụ nke onye ọkpọ rugby na ihe nkiri egwuregwu French "Le bonheur est dans le pré".
O meela ọtụtụ ihe nkiri kemgbe ahụ nke kachasị ọhụrụ bụ "Ulysses & Mona". Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Eric Cantona Nwunye na Childrenmụ:
Apụghị na mgbagwoju anya nke ọrụ ịgba bọl ya, Cantona nwere alụm na-enweghị isi na Isabelle nwunye ya mbụ mụrụ ya ụmụ abụọ, Raphael na Josephine tupu ha agawa ụzọ iche na 2003.
N'ịga n'ihu, Cantona zutere onye na-eme ihe nkiri Rachida Brakni mgbe ọ na-eme ihe nkiri ahụ L'Outremangeur.
Ha malitere ịlụ n'oge na-adịghị anya wee lụọ na 2007. Alụmdi na nwunye ha gọziri nwa nwoke Emir.
Eric Cantona ya na nwunye ya nke abụọ Rachida Brakni.
Ndụ Eric Cantona:
Banyere ndụ ezinụlọ Cantona, ọ sitere na ndị ezinụlọ obere ọgbakọ nke ndị otu 3. Anyị na-enye ihe omuma banyere ndi otu ezi na ulo ya.
Banyere nna Eric Cantona:
Albert bụ nna Cantona. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nọọsụ na-agwọ ọrịa uche n'oge ọ bụ nwata banyere akụkọ egwuregwu bọọlụ wee bụrụ onye na-amakarị onye na-ese ihe.
Cantona toro Albert maka ịkụziri ha ka ha lelee ụwa anya oge niile, nwee ekele maka ịma mma ya ma mụta ihe site na ọdachi dakwasịrị ya.
Eric Cantona ya na nna ya Albert.
Banyere nne Eric Cantona:
Éléonore Raurich bụ nne Cantona. O nyeere aka zụlite Cantona na ụmụnne ya ma bụrụkwa nke kacha nwee mmetụta na ndụ Cantona.
O nyere ya obi ike ọ chọrọ iji kwupụta onwe ya ma kpalie ya na ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ọ gbanyere obi ya.
Banyere ụmụnne Eric Cantona:
Cantona nwere naanị ụmụnne abụọ, nwanne nwoke okenye aha ya bụ Jean Marie yana nwanne nwoke nwoke aha ya bụ Joel.
Jean na-arụ ọrụ dị ka onye na-egwu egwuregwu tupu ya etinye aka na ọrụ ihe nkiri mgbe Joel nwere ọrụ ịgba bọọlụ na-esighi ike tupu ya emee ihe ọ bụla.
Ericmụ nwanne Eric Cantona Jean (n'aka ekpe) na Joel (n'aka nri).
Banyere ndị ikwu Eric Cantona: Ndị nne nne Cantona bụ Pedro Raurich na Francesca Farnos ebe nna nna ya na nne nne ya bụ Joseph Cantona na Lucienne Thérèse Faglia n'otu n'otu.
Cantona nwere ụmụnne nna na nwanne nne ya ndị amatabeghị onye ọ bụ, amatabeghịkwa ụmụ nwanne ya, ụmụ nwanne ya, na ụmụ nwanne nne ya n'oge ederede.
Eric Cantona Ndụ Nke Onwe:
N'adịghị ka ọtụtụ ịkọ nkọ, Cantona enweghị nsogbu omume kama ọ bụ ụdị omume ọtụtụ mmadụ na-agaghị edili. Onwe ya na-egosipụta àgwà nke Gemini zodiac ihe ịrịba ama dị ka mmụọ na-adịghị ngwa ngwa na uche.
N'ikwu ya, o nwere mmetụta uche, na-eche echiche, ma na-emeghe ikpughe nkọwa gbasara ndụ ya na nke onwe ya.
Ihe na-amasị ya na ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere ịkụ bọl n'ụsọ osimiri, ime ihe nkiri, ide ihe, na iso ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Eric Cantona nwere mmasị n'ịgba bọl n'ụsọ osimiri. Ebe E Si Nweta Foto: Pinterest
Eric Cantona Ndụ Eziokwu:
Know mara na Catona nwere atụmatụ ọnụọgụ ruru ihe karịrị $ 25 nde n'oge ederede? Onye na-eme egwuregwu bọọlụ tụbara ntọala nke akụ na ụba ya dị ka onye ọkpụkpọ tupu ọ banye na ntụrụndụ zuru oke.
Eric Cantona bụ otu n'ime ndị na-agba bọọlụ ole na ole mere ka ọ buru ibu mgbe ọ lara ezumike nká. Ebe E Si Nweta Foto: Express.
Akụ ndị na-agba akaebe banyere oke akụnụba akụkọ ọdịnala ma nyekwa nsị maka usoro mmefu ya gụnyere ụlọ obibi ya m 2m na mpaghara Fontenay-sous-Bois nke ejiji na Paris.
Agbanyeghị na amabeghị ọtụtụ ihe gbasara mkpokọta ụgbọ ala Cantona, ekwenyere na ya nwere agụụ maka ịnya ụgbọ ala na-egosipụta echiche nke ụdị ya.
Eric Cantona Eziokwu:
Daalụ maka ịgụ ihe a. N’ebe a, anyị na-ewetara gị akụkọ ndị amabughị nke ị maghị gbasara Eric Cantona.
Cantona aga-eme ka o doo anya banyere okpukpe ya. A maghịkwa na ya ekweghị na Chineke. Ka o sina dị, ọ na-ekpe okpukperechi n'àgwà ndị ọzọ kachasị dị ka okike, nkwado na inye azụ.
Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ:
A na-enye ya sịga na onyonyo ma na-a drinkingụ mmanya nke ọma. Ọgwụ ọmụmụ banyere usoro anwụrụ anwụrụ ya na-ekpughe na ọ rapara na ụtaba sịga dịka ọ na-emegide cannabis na mmebi ntụrụndụ ndị ọzọ.
Eric Cantona na-ese anwụrụ ma na-a drinksụ ihe ọ drinksụiblyụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ebe E Si Nweta Foto: Spool na Pinterest
Akụkọ a bụ nke ihe ọkụkụ ochie nke ndị egwuregwu bọọlụ na-enweghị akara ọ bụla n'oge ederede. Onweghi nsogbu ndi ozo choro ka o nweta aru di ka o gha aghago.
Know ma na aha Eric pụtara "Otu" ma ọ bụ "Onye ọchịchị" ebe "Cantona" bụ aha French si pụtara "Ekele". Na mgbakwunye, akpọrọ ya "The King" maka ịgba bọọlụ ya na England.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Eric Cantona gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.